MODA | Article Detail | Brow Pinching ဆိုတာ... ?
Brow Pinching ဆိုတာ... ?
ပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွေကနေ ခဏလောက်ရုန်းထွက်ချင်ကြပေမယ့်လည်မဖြစ်နိုင်တဲ့နောက် ရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးကြရပါတယ်။ ဒီလိုပင်ပန်းမှုတွေကြားကနေ့စဉ်ကြည့်နေသုံးနေရတဲ့ Screen တွေကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ မျက်လုံးကိုသာမက မျက်ခုံးကိုပါသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် treatment လုပ်တဲ့ နည်လမ်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Ayurvedic principles ဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အိန္ဒိယအဆိုကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ခန့်လောက်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး mind-body health system လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ စိတ်ကျန်းမာရင်ကိုယ်ကျန်းမာမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအတိုင်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေခြင်းကလူကိုကျန်းမာစေပါတယ်။ ဒီလိုဘဲပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေထဲကမှအာရုံကြောနဲ့ပတ်သတ်ပြီးညောင်းညာမှုကို မျက်ခုံးကတစ်ဆင့်သက်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Brow pinching ကခေတ်စားလို့လာပါတယ်။ မျက်ခုံးမွှေးတစ်ချို့ကိုဖယ်ရှားပုံဖော်တဲ့အလှပုံဖော်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အဲ့လို ဆွဲနှုတ်တာ waxing စတဲ့နာကျင်မှုမျိုးမရှိဘဲနှိပ်နယ်တာကိုအဓိကထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အချိန် ၁၀မိနစ်ကနေ ၂၀မိနစ်အတွင်း treatment လုပ်ရတာဖြစ်ပြီးမျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးအနားတစ်ဝိုက် သွေးလှည့်ပတ်မှု ကိုအဓိကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေရန်နဲ့ယောင်ယမ်းမှု ညောင်းညာမှုတွေလျော့ကျအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အားစိုက်ထုတ်မှုများပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးအနားတစ်ဝိုက်ကကြွက် သားတွေပြေလျော့စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေခြင်းကတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအားအင်ပြန်ပြည့်သွားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လက်မနဲ့လက်ညိုးကြားမျက်ခုံး ကိုထားပြီး အားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး နှိပ်နယ်လိုက်တဲ့အခါ တကယ်ကိုအားအင်အသစ်တြွေ့ပန်ရစေတာမို့၁၀မိနစ်ခန့်သာအခိျန်ပေးရတဲ့ brow pinching နည်းလမ်းလေးကတော့ LONDON မှာရှိတဲ့ Blink Brow Bar မှာအရမ်းကို ခေတ်စားလို့လာပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သူအများစုအတွက် နေ့လည်စာစားချိန်လေးမှာတောင်အချိန်ပေးလုပ်နိုင်တာမို့လေးလံနေတဲ့အာရုံကြောတစ်ချို့ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လန်းဆန်းစေပါတယ်။
Brow oil လိုအရာကိုသုံးပြီနှိပ်နယ်ခြင်းကြောင့်လည်းမျက်ခုံးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအားကောင်းစေပြီး အညောင်းအညာပြေစေတာကြောင့် menu အသစ်အနေနဲ့customer တွေသဘောကျ လုပ်လာကြတဲ့busylife တွေအတွက်တကယ်သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ ဒီနည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အိမ်မှာပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့်ပါ။ အဆီတစ်မျိုးမျိုးကိုသုံးပြီး လက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုသုံးပြီးနှိပ်နယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မျက်ခုံးအစနားကနေတစ်ဖြည်း ဖြည်းချင်းနှိပ်နယ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးအဆုံးထိဆင်းသွားပြီး သင်နေရတာကောင်းတဲ့အထိစိတ်ကြိုက်နှိပ်နယ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကြာချိန် ၁၀မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်ထိကြာတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ရှေးကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပြီးတကယ်အသုံးဝင်တာမို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။